ABS High Gloss Edge Banding - China ABS High Gloss Edge Banding Supplier, Factory -HengSu Edging
musha » Products » Edge Banding » ABS Edge Banding
ABS (acrylonitrile butadiene styrene) chiri kwechirwere nemishonga, Mechanically uye thermally vakashinga, yepamusoro thermoplastic riri mukudyidzana nezvimwe zvisikwa ruzha. Nokuti pamusoro 20 makore zvino, ichi kuiisa chlorine isina mapurasitiki ane nyuchi vakabudirira kushandiswa midziyo indasitiri. Ndiyo hunoshamisa chikumbiro, kushandura uye kurasa maitiro, kunyanya, e ABS anoita kuti zvive nehuwandu hwehuwandu hwemisika yekutengesa fenisha.
ABS kumucheto bandings wakaumbwa ABS nebwe uyewo rinoumba kupatsanurwa nokuda nesayenzi payakavakirwa. The zvigadzirwa iine kukwegura zvikuru nemishonga, okunze nemishonga, kutsiga guru kukura, zvakarwadza chaizvo nemishonga, kwezvakatipoteredza ushamwari, hapana weheavy metal uye kunokuvadza fuma. Ndiro sarudzo yefenesi yevana.
ABS nhepfenyuro dzinoshandisa zvakanakisisa ABS zvisikwa zvakasikwa, zvine maziso akanaka uye dzakagadzikana uye zvisarudzo zvakawanda zvemavara.